ओलीजी र म झ्याप्पै मिल्यौंः प्रचण्ड « Bagmati Samachar
ओलीजी र म झ्याप्पै मिल्यौंः प्रचण्ड
१९ कार्तिक २०७५, सोमबार १४:४३
१९ कार्तिक ।
काठमाडौ । पहिलो संविधानसभा चुनावको बेला म सम्झिन्छु, माओवादीले कहाँ चुनाव जित्छ, बढीमा चाररपाँच सिट जित्छ भन्थे मान्छेहरु । हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रस्ताव राख्दा उहाँहरुको कुरा पनि त्यही थियो । म आफैं पनि तड्पिराखेको थिएँ, के हुने हो, के १
जे(जे पर्‍यो पर्‍यो, कुरो मिलेन, ४० र ६० गर्न अलि गाह्रो भो, त्यसो भएपछि हामफाल्यौं । परिणाम आउँदाखेरि बडो बिचित्रको आयो । हामी आफैंले पनि नसोचेको त्यति धेरै भोट आयो । त्यसपछि मैले भन्ने गरेकोे छु, माओवादीले धर्ती छाडेको हो । त्यो भोट माओवादीले पचाउनै सकेन क्या १ कहाँबाट आयो आयो ।
यति भएपछि उहाँहरु कता लाग्नुभयो भने माओवादीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा लाग्नुभयो । हामीभित्र के भयो भने, म त यहीँ छु मिलेर काम गर्नेमै छु तर हाम्राहरु पार्टी फुटाउनेतिर लागे । र, चार पाँच वर्षपछि अर्को चुनावमा जाँदा त परिणाम ठिक उल्टो आयो ।
अब माओवादीको ठाउँमा एमाले, एमालेको ठाउँमा माओवादी । ०७० सालको चुनावको परिणाम भनेको हो मैले । ठीक उल्टो भयो । मैले बडो सैद्धान्तिक कुरा भनेको छु है कमरेडहरु, ख्याल होइन । व्यवहारिक घटनामात्र भनेको होइन । यसले नेतृत्वलाई र कार्यकर्ता सबैलाई जमीनमा टेक्ने बनाइदियो । एमाले पनि जमीनमा, माओवादी पनि जमीनमा ।
सबै जनताको बीचमा टेकेर हामीलाई आफ्नो हैसियत के हो भन्ने बुझ्ने बनाइदियो । लामो संघर्षले घटनाक्रमले उतार(चढावले हामी सबैलाई अलि परिपक्व बनाइदियो । अलि व्यवहारिक पनि बनाइदियो । अलि विवेकशील पनि बनाइदियो र अबचाहिँ हाम्रो अगाडि विकल्प संविधान मिलेर बनाउनुको छैन, सरकार मिलेर बनाउनुको छैन र पार्टी एकताको विकल्प छैन भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्वलाई ल्याइपुर्‍यो ।
मलाई अहिले के लाग्छ भने कमरेड मदन र मेरोबीचमा त्योबेला गम्भीर ढंगले पार्टी एकताबारे छलफल भएको भए के हुन्थ्यो होला त रु हामी दुबै युवाहरु आफ्नो सक्रियता र आफ्नो त्यागका कारणले नेतृत्वमा आइपुगेका थियौं । देशमा केही नयाँ चिज गरौं भन्ने जोस हामीमा भरपुर थियो । त्यतिबेलै कुरा गर्न पाएको भए के हुन्थ्यो होला रु
हिसाब तपाईहरु गर्नुहोला, माधव नेपालजी महासचिव र म अध्यक्ष भएका बेला भर्खर शान्ति प्रक्रियामा हुँदाका बेला ५० –५० मा तालमेल गरेको भए पार्टी एकता त्यतिबेलै भइसक्थ्यो । तर, ५०–५० को कुरा त्यो मिलेन । त्यो पनि नेतृत्वकै कारणले हो । अहिलेचाहिँ फेरि घुम्दै फिर्दै यति धेरै संघर्ष, रुपान्तरण र बहसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा हामी मिल्यौं ।
कमरेड केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष र म पनि अर्को पार्टीको अध्यक्ष । हामी दुबै संघर्ष गर्दा पनि बेफिक्री संघर्ष गर्‍यौं, मिल्ने भन्दा पनि झ्याप्पै मिल्यौं । यो हो डाइलेक्टिस । नेता भनेको यस्तो हुन्छ क्या ? मौकामा हिरा फोर्न सक्नुपर्‍यो नि । नेताले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यो भयो । र, त्यो निर्णय सही थियो भन्ने दुबैतिरका आम कार्यकर्ता र जनताले अनुमोदन गरिदियो निर्वाचनमार्फत ।
हामी पार्टी एकताको त्यो ठाउँमा आइपुग्यौं र मलाई गर्व छ । म तपाई अगुवा कार्यकर्ता कमरेडसँग भन्न चाहान्छु, मलाई गर्व छ । मैले कमरेड मदन भण्डारीको निधन भएकै दिन ९जेठ ३ गते० पार्टी एकता गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेँ र कमरेड केपी ओलीले ताली ठोकेर त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो अनि जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो ।
अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौं । हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्रियमात्र छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाएरमात्र यो देशमा सम्बृद्धि र स्थिरता हुन सक्छ भन्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दैछौं । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराभित्र केन्द्रित भएर हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न खोजेका छौं ।
केपी ओली र मेरो बीचमा लामो र श्रृंखलाबद्ध छलफल भएर टुंगोमा पुग्ने बेलामा यी ऐतिहासिक परिघटनाबारे सोच्यौं । हामीले एकता गरेनौं भन्दा हुन्छ चाहिँ के रु फेरि पनि यो देशमा कसैको बहुमत हुँदैन । हामी झगडा गरेर फेरि चुनाव लड्न गयौं भने यो देशमा आर्थिक विकास पनि हुँदैन ।
राजनीतिक अस्थिरताको फेरि अर्को दौड ७० वर्ष जान सक्छ । यदि फेरि पनि त्यहि अवस्था दोहोरियो भने देश यहि रुपमा रहन सक्छ त रु हामीले यो राष्ट्रलाई जोगाउन सक्छौं त रु हामीले यसमा पनि सौच्यौं । बिखण्डनका ट्रेण्डहरु हामीले देखेका छौं । हामीले यसो नगर्दा देशको अखण्डता र राष्ट्रिय एकता नै जोखिममा पर्छ भन्ने देखेपछि हामीले म कहाँ पर्छु भनेर सोचेनौं ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी हौं हामी । यो ठाउँमा हामीलाई कसैले दया गरेर ल्याइदिएको हो त रु देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरुले माया गरेर यो १४ वर्ष बनबास बसेकोलाई बिचरा र काराबास बसेकालाई पनि बिचरा भनेर ल्यादिएको हो र यो ? यो तपाई हामी सबैले मिलेर लडेर रगत बगाएर खोसेर ल्याएको हो नि ।
अब ठूलो अभियान आउँछ
प्रतिक्रियावादीहरुले नेकपाको एकता तलसम्म हुँदैन भन्न थालेका छन् । पहिला पहिला संविधान गणतन्त्र हुँदैन भनेजस्तै यो पार्टी एकता पनि हुँदैन भन्दैछन् । सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर प्रचार गरेका छन् ।
कमरेड महासचिवले राम्रोसँग भन्नुभयो । महासचिव र मेरो भाषा बिस्तारै बिस्तारै मिल्न थालेको छ । कुरा बुझ्नुस है, हामी हलगोरु जस्तो हुन थालिएको छ । सबै ठाउँमा सँगै गएर एकले अर्काको भाषा सुन्दा–सुन्दा एउटै भाषा हुन थालेको छ ।
हामीले भनेका छौं, यो पार्टी एकता सफलताको साथ तलसम्म सम्पन्न हुन्छ । त्यो पनि छिटै । बिभिन्न कार्यदलका सुझालाई अन्तिम रुप दिएर सचिवालय र स्थायी समितिमा पेश गर्नका लागि कमरेड महासचिवकै नेतृत्वमा अर्को कमरेड समेतको टिम बनेको छ । हिजो बिहानमात्र मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो ।
आज बिहानमात्रै मेरो कमरेड माधव नेपालजीसँग पनि कुरा भयो । हामीले अब छिटोभन्दा छिटो तलसम्म एकता टुंग्याउनुपर्छ र एउटा अभियानको रुपमा देशभरि जानुपर्छ भनिएको छ । कमरेडहरुलाई बिल्कुल कसैको प्रचारबाट भ्रममा नपर्न म अनुरोध गर्न चाहान्छु । हेर्नुहोला, केही दिनभित्रै पार्टी एकताको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिनेछ ।
हामी नेताहरु तपाईहरुसँग एउटा योजना र कार्यक्रम लिएर अभियानका रुपमा आउछौं । देशलाई एकपटक जुरुक्क उठाउने ढंगले आउछौं । हामीसँग अजेय शक्ति, एउटा बिशाल शक्ति सञ्चय गरेका छौं । ४० औं वर्ष यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएका हजारौं नेताहरु हामीसँग छन् ।
लाखौंको संख्यामा युवाहरु हामीसँग छन् । संघर्षका सबैखाले रुपहरुको अनुभव भएको एउटा विशाल फौज हामीसँग छ । हामीले पार्टी एकतालाई टुंग्याएर अभियानका रुपमा हामी गइसकेपछि प्रतिक्रियावादीहरुले हाम्रो विरुद्ध गर्ने गरेका दुश्प्रचारहरु हामी एउटै योजना र अभियानबाट धूलोपीठो पार्न सक्छौं । यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।
हामीले त्यसो गर्नैपर्छ हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । हामी त्यही बाटोमा जानैपर्छ र जान्छौं । हामीलाई थाहा छ, हिजो कति ठूला घेरा र षडयन्त्र तोडेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अहिले भइरहेका दुश्प्रचारहरु त हाम्रा लागि दूधभात नै हो, मज्जाले पचाउँछौं ।
सरकारको कुरा पनि आएको छ । हाम्रो यहाँ समस्या के छ भने, रणनीतिक कामहरु गर्‍यो भने तत्कालीन काम छुट्ने । तत्कालीन काम गर्‍यो भने रणनीतिक काम छुट्ने र एकांगी हुने खतरा हामीले भोग्दै आएका छौं । हामीकहाँ लडाइ जनताले र पार्टीले गर्छन् र त्यो आन्दोलन रोक्नको लागि पूरानो नेतृत्वको बलमा पूरानो संरचनाले असहयोग गर्छ ।
सात सालमा राणा शाहीको विरुद्ध चलेको आन्दोलन दबाउनका लागि उनीहरुको प्रशासनले आन्दोलनकारीमाथि सकेको दमन गर्न खोजेकै हो । ०४६ मा आन्दोलनकारीमाथि राजाको प्रशासनले रोक्न बल गरेकै हो । यही कुरा पछि पनि भएकै हो । परिवर्तन कार्यन्वयन गर्ने बेला पुराना कर्मचारीतन्त्रका हाकिमहरु बदलिएनन् ।
ऐन नियम कानुन मिल्दैन हजुर भन्दाभन्दै आन्दोलनबाट आएका नेताहरुको दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीले गर्छन् । केही वर्षको संगतपछि त नेता नै कर्मचारी जस्तो भएर निस्किन्छ । अनि आन्दोलनका उपलव्धी पनि गुम्ने गरेका छन् नि । तपाई हामी सबैले बिचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।
योपटक हाम्रो कमरेड केपी ओलीसँग मेरो लगातार कुरा हुने गर्छ । कमरेड माधव नेपाल लगायत उहाँको टिमसँग पनि मेरो कुरा हुने गर्छ । अहिले त हामीले खाली सामान्य राजनीतिक परिवर्तन गरेकोमात्र होइन, सिस्टम परिवर्तन गरेको हो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता कुरा सामान्य राजनीतिक हेरफेरमात्र होइनन् ।
संविधानमा सबै मौलिक अधिकार लेखिएका छन् । दुनियाँको संविधानमा यति धेरै अधिकार छैनन् । तर, लागु गर्ने बेलामा पुरानो कर्मचारीतन्त्र बाधक हुन्छ । प्रदेशमा कर्मचारी जान मान्दैनन् । सिंहदरबारभित्रै बस्न खोज्छन् । अधिकार तल दिने भनेपछि पसिना आउँछ, माथि नै राख्न खोज्छन् ।
मलाई याद आउछ, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलजीले संविधानसभामा मेरो नेतृत्वमा समस्या समाधान समितिको बैठक बस्दा उहाँ दिक्क मानेर ‘यो के के भाउँतो ल्याउनुभयो’ तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो । भाउँतो ल्याइएको भन्ने ठान्नुभएछ क्या उहाँले । यो भाउँतोलाई के गरी असफल बनाउने भन्ने दिमाग भएपछि लागु हुन्छ त अब ?
त्यसकारण, यो कर्मचारीतन्त्रलाई पनि अहिलेको परिवर्तन बुझाउनुपर्‍यो क्या । नेताहरुले, पार्टीले कर्मचारीलाई यो परिवर्तनको ऐतिहासिक महत्व बुझाउनुपर्छ । यसले जनताको हित कसरी गर्छ भनेर कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई मेरो आरोप होइन । उनीहरु त बिचरा लडेका होइनन् नि ।
आरोप भन्दा पनि उहाँहरु त दमन गर्न भनेर बस्नुभएको हो नि । उहाँहरुलाई हामीले सिकाउनुपर्ने । तर, अहिले त कर्मचारीले नेतालाई सिकाउन थाले । अस्ति चितवनमा गएको थिएँ । राष्ट्रिय निकुन्ज सम्बन्धी ऐन रहेछ २०२९ सालको । त्यतिबेलाको ऐनले मान्छेलाई हेरेको रहेनछन् । त्यो माडी भन्ने ठाउँ नै त्यतिबेला बनेको थिएन । मान्छे नबसेकाले जनावरको सुरक्षामात्र हेरियो । अब ऐनहरु समयानुकुल बदल्नुपर्छ ।
एउटा कुराचाहिँ छातिमा हात राखेर भन्नुपर्दा तपाई हामी सबै अलिकति बिग्रेका छौं नि आजभोलि । बिग्रिएकाहरुको एकता पनि हो नि यो यो पार्टी एकता । सप्रेकामात्रको एकता होइन । हाम्रो कार्यशैली, आचरण बिग्रिएको छ । हिजोको जस्तो समर्पण त हामीले त्यागेकै हो नि । सबै चिज मेरा लागि, सबैले मेरा लागि काम गर्दिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
हामीले नयाँ ढंगको पार्टी बनाउने हो । यहीखालको प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मन जितेर समाजवाद ल्याउने हो । हामीले हिजोको रसियाको मोडल पनि अब काम गर्नेवाला छैन । चाइनिज मोडलको नक्कल गरेर पनि हुनेवाला छैन । नेपाली मोडेलको विकास गर्नुपर्ने छ । यसमा हामी धेरै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यसो गर्न सकियो भने यो पार्टी महान हुनेवाला छ । ममाथि कतिपयले भन्छन्, प्रचण्ड अस्थिर छ । अस्थिर मान्छेले कहाँ हान्छ थाहा छैन पनि भन्छन् । यसो होइन, म एकदम सोझो मान्छे हो वास्तवमा । गर्दागर्दै कस्तो भइदियो भने।।म कुनै बहकाबमा छैन भन्न खोजेको हो ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार बिराटनगरमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश